बाढीले आफ्नो १० करोडको सम्पति बगाए पछी गहभरी आशु पर्दै एक वृद्द (भिडियो) - Nepali in Australia
June 17, 2021 June 17, 2021 autherLeaveaComment on बाढीले आफ्नो १० करोडको सम्पति बगाए पछी गहभरी आशु पर्दै एक वृद्द (भिडियो)
वर्षाका कारण आएको बाढीले गर्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कार्यरत आठ जना सम्पर्कविहीन भएका छन् ।तीन चिनियाँ, तीन भारतीय र दुई नेपालीसहित आठ कामदार बेपत्ता भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीयबासीको सहयोगमा उनीहरुको खोजी भइरहेको छ । त्यस्तै मेलम्चीमा बाढीमा चिनिया र भारतीय नागरिक सहित २० जना बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता हुनेमा तीन भारतीय र तीन चिनियाँ नागरिकसमेत रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
निर्माणस्थलमा रहेका ७६ जनालाई हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी काठमाडौँ र धुलिखेल ल्याइएको आयोजनाले जनाएको छ । उद्धार भएका सबैको अवस्था अहिले सामान्य छ ।आयोजनाको मुख्य सुरुङ, पानी प्रशोधन केन्द्र र मुख्य बाँधमा क्षति नपुगेको विवरण प्राप्त भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाको क्याम्पहरु, उपकरणहरु, निर्माण सामग्री, पहुँच सडक र पुल बाढीले बगाएको छ । मङ्गलबार साँझ झण्डै सात बजे आयोजना क्षेत्रमा बाढी पसेको थियो । अम्बाथानस्थित ‘हेडवक्र्स’ भन्दा माथि परिरहेको अबिरल वर्षाको कारण बाढी आएको थियो ।बाढीले आफ्नो १० करोडको सम्पति गएपछि एक वृद्द भावुक हुदै मिडियामा आफ्नो दुखेसो यसरी पोख्छन । भिडियो
९ बर्षिय सचिन परियारले तोडे सबै रेकर्ड, लोक गीतको इतिहासमै २४ घण्टा नबित्दै ३ नम्बर ट्रेन्डिङमा (भिडियो हेर्नुहोस)
भर्खरै गणेश लामा पोखराबाट प’क्राउ ! प’क्राउ गर्नुको कारण यस्तो, आयो प्रह’रीको जवाफ ! Ganesh Lama (भिडियो हेर्नुहोस)